Saldhigga Korontada |Hal qayb oo ka mid ah Mamo Power Technology Co., Ltd.
Mamo POWER Naaftada Dab-dhaliye ee Xarunta AWOODDA
MAMO POWER waxay siisaa xal koronto oo dhamaystiran oo loogu talagalay abuurista korantada aasaasiga ah ee Saldhigga Korontada.Waxaan ku wanagsannahay bixinta xal koronto oo buuxa oo ku saabsan saldhigga korantada maadaama aan ka qayb qaadanay bixinta xarumaha korontada ee adduunka oo dhan.Goobaha warshaduhu waxay u baahan yihiin tamar si ay u xoojiyaan kaabayaasha iyo hababka wax-soo-saarka, sida dhismaha goobta, abuurista tamarta dhirta, iwm. Mararka qaarkood, marka ay dhacdo korontadu, waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo koronto kayd ah si loo ilaaliyo xaaladaha shaqada qaarkood ee gaarka ah, si aysan u dhicin. si ay khasaare badan u geystaan.
MAMO POWER waxay naqshadayn doontaa xalal awoodeed oo macaamiisha ah si ay mashruuc kasta uga dhigaan mid gaar ah.Iyadoo xaddidaaddeeda gaarka ah, waxaan ku siineynaa khibrad injineernimo si aad u naqshadeyso xalalka awoodda ee daboolaya baahiyaha macaamiisha.
Dab-dhaliye tayo sare leh oo Mamo Power ah ayaa barbar socon kara.Shaqada kontoroolka fogaanta ee otomaatiga ah, gen-dejinta cabbirada hawlgalka waqtiga dhabta ah iyo gobolka waa lala socon doonaa, mashiinada ayaa ku siin doona digniin degdeg ah si ay ula socdaan qalabka marka cilad dhacdo.
Mamo waxa ay ku siin doontaa qalabka korontada dhaliya ee la isku halayn karo, adeega ugu dhaqsiyaha badan, si aad u hubiso in tas-hiilaadkaaga warshadu u shaqayn karaan si badbaado leh oo la isku halleyn karo.